မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: နှမသားချင်း မစာနာ ၊ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ် အရေးယူ ဖော်ထုတ်ပေးကြပါ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Posted by ဒီရေ at 9:03 AM
လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် အရေးယူဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေ....
ပညာရှိတို့ သည် တရားသောလမ်း နှင့် ဦးနှောက် ကိုသာအသုံးပြုာကသည် သို့ သော်....
သတင်းတွေအေးနေကြပါလား ဖြေရှင်းချက်တွေ ထင်မြင်ချက်တွေမလာတော့ ဘူးလား ဒီမှာပဲပြီးသွားတော့ မှာလား...
stupid guys , who gave authority to do like that. malaysia government and myanmar embassy in malaysia must response to solving and stop these human right terrorist team and cruel action.
kyaw zayar min said...